Ny Voninahitra Shekinah an’Andriamanitra. BNL Ministries - mg06
Ny Voninahitra Shekinah an’Andriamanitra.
Ny fonenanao 'Andriamanitra.
Ny sary lehibe dia azo avy amin'ny...
(Mpanakanto - Norbert McNulty)
Tabenakelin’i Jehovah tany an’Efitra.
Ny Tabenakelin’i Jehovah tany an’Efitra dia tahaka ny tranolay (tente), namboarina mba ho azo vahana (demonter), ka nafindra ho any amin’ny toerany (destination) manaraka, tahaka ny vahoaka nandalo ny tany nampanantenaina, nomen’Andriamanitra an’i Mosesy ny hanamboarana azy ao amin’ny Eksodosy 25:8
“Avelao izy ireo hanao toerana masina ho ahy; mba ahafahako mipetraka eo anivony.Araka izay rehetra efa nasehoko anao,tahaka ny modelin’ny taberinakely,ary ny endriky ny fitaovana rehetra ampiasaina ao,dia izay no hanaovanao azy.”
Ny Tempolin’i Solomona
Davida dia naniry ny hanangana tempoly maharitra ho an’Andriamanitra fa nosakanana tsy hanao izany izy. Nilaza taminy Andriamanitra ao amin’ny 1Tantara 28:6 “ Dia hoy izy tamiko, Solomona zanakao, izy no hanangana ny tranoko sy ny tokontany (Parvis): fa nofidiko izy mba ho lasa zanako, ary Izaho ho rainy.”
Ny Tempoly Faharoa.
Rehefa tafaverina avy tany amin’ny fanandevozana tao Babylon ny vahoaka dia natsangany indray ny tempoly. Naharitra 49 taona no nanaovana izany, zava-dehibe io isa io satria mampiseho ny vanim-potoanan’ny faminaniana ao amin’ny Daniela 9:25 izay nitranga. Fito herinandro no hanorenana indray ny tempoly. 1 herinandro= 7 taona (na 1 andro= 1 taona).Io no ahafahantsika mikajy ny fotoana izay hipotran’ny Mesia ao Jerosalema. 7 herinandro ampiana 62 herinandro = 483 years. Teo no nipoitra Kristy ary nofantsihana teo anelanelan’ny faha fitopolo herinandro. Io dia mamela hatsasaka herinandro (3.5 taona) izay mbola hitranga amin’ny Jiosy.
Tsy maintsy voasoratra ao amin’ny soratra Masina izany “Fantaro ary ary saintsaino, fa hatramin’ny nivoahan’ny didy ny hanavaozana sy hanamboarana an’i Jerosalema mankany amin’ny Mesia ilay Printsy dia ho fito herinandro sy roa amby enimpolo herinandro: ho vita indray ny làlana, ny rindrina, eny fa na dia amin’ny andro sarotra aza. (Daniela 9:25). Nisy didy nivoaka (decret) anankiroa, ny iray avy amin’i Kyrosy ary ny faharoa avy amin’i Dariosy II. Ilay faharoa no mindraika amin’io faminaniana io. (Ezra 1)
Ny Tempolin’i Heroda.
Modely ny Heroda tao Tempolin'i. Circa 30ad.
Heroda dia nanampy tamin’ny Tempoly Faharoa. Izany dia nahafahana namerina azy tamin’ny hahavony tamin’ny voalohany, araka izay nataon’i Solomona.
Ny Fitoeran’Andriamanitra ankehitriny.
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 2, dia misy trangan-javatra voalaza, dia Andriamanitra (Fanahy Masina), tonga tamin’ny endrika “Lelafo”, ary nipetraka teo ambonin’ny lohan’ny mpino tsirairay.Amin’ny Kristiana dia fantatra io hoe “Batisan’ny Fanahy Masina”. Ho an’ny mpino tsirairay io, arak any voalazan’i Petera ao amin’ny Asan’ny Apostoly 2:38 “Mibebaha, ary aoka samy atao batisa amin’ny Anaran’i Jesosy Kristy mba ho famelan-keloka, ary ianareo handray ny fanomezan’ny Fanahy Masina.”
Trano Manao Ahoana No Ateonareo Ho Ahy?.
Dikan’ny Endriky ny Tempoly.
Ny Tempolin’i Jerosalema dia nanana tokontany ivelany (Parvis), ny toerana masina, ary ny masin’ireo masina (Pluriel) izay hidiran’ny MpisoronaBe indray mandeha isan-taona, miaraka amin’ny Ràn’ny fanavotana (Atonement) ny fahotan’ny vahoaka.Ny firafitry ny tempoly dia mampiseho olombelona, misy vatana (tokontany ivelany), saina (toerana masina), ary ny masin’ireo masina (fanahy) izay hitoeran’ny voninahitra Shekinah an’Andriamanitra, ary ao koa no hipetrahan’ny fiaran’ny fanekena (Tenin’Andriamanitra)
Maro no milaza azy ho Kristiana, fa tsy mbola nanana Mpisorona Be (Jesosy Kristy) niditra miaraka tamin’ny rà fanavotana.
Maro ny Kristiana no sahirana amin’ny traikefany - tahaka ny jiro ao amin’ny tokontany (Alina sy andro). Ny sasany niditra ny toerana masina, (fiainana ao am-piangonana) - jiro maharitra fa tsy voa-janahary, avy amin’ny fanaovan-jiro fito. (mampiseho ny taom-piangonana fito). Fa tsy tafiditra tao amin’ny efitra lamba izay misy ny jiron’ny fanatrehan’Andriamanitra.
Ary Mosesy niandry ondry an’i Jethro rafozan-dahiny, mpisorona tao Midiana: nentiny tany ambadiky ny tany efitra ireo, ary tonga tao an-tendrombohitr’Andriamanitra, eny hatrany Horeba.
Ary nisy anjelin’i Jehovah nipoitra taminy tamin’ny lelafo avy ao anaty kirihitr’ala: ary nijery izy, ary indro, nirehitra ny kirihitr’ala, kanefa tsy levona.
Pillar of Fire / Andry Afo (Colonne de Feu).
Andriamanitra namaly an’i Elia tamin’ny afo.
Ny tena maha samihafa ny Jodaisma sy ny Kristiana, amin’ny finoana hafa rehetra, dia ny fisian’ny “Shekinah” Voninahitr’Andriamanitra- Ny AndryAfo.
Andriamanitra nitondra ny vahoakany, tamin'ny Andry Afo nandritra ny alina, ary Andry Rahona tamin'ny atoandro. Tena feno voninahitra tokoa io zava-nitranga io.Ny zavatra tena mahavariana dia rehefa manome hazavana ny Israely izy, dia aizina mangitsokitsoka no ao amin'ny fahavalony.
Rehefa nanao sorona i Elia teo antendrombohitry Karmela, dia namaly ny vavaka nataony Andriamanitra tamin’ny afo.
Tamin’ny vita ny androny tety an-tany, dia nofaon’ny Kalesy Afo izy.
Tamin’ny Jesosy novana endrika teo an-tendrombohitra, ny tarehiny sy ny akanjony dia nazava namirapiratra.
Paoly dia nifanena tamin’ny Tompo tamin’ny làlana mankany Damasy, hazavana namirapiratra… Hoy izy “Iza moa ianao Tompoko?” “Izaho no Jesosy” ny valiny.
Ny Famamtarana (Dallas,TX)
Tsy fantatrareo va fa ny vatanareo dia tempolin'ny Fanahy Masina, izay mitoetra ao anatinareo, sy noraisinareo tamin'Andriamanitra, ka tsy anareo ny vatanareo?
Fa novidiana lafo ianareo: noho izany omeo voninahitra Andriamanitra amin'ny tenanareo, ary amin'ny sainareo, izay an'Andriamanitra.
1 Korintiana 6:19,20
Andry Afo -Sorony.
Mazava nanodidina ny lohan'i Rahalahy Branham.
Kalesy afo. Elia rehefa nisambotra-up.
Andry Afo - Houston 1950
Kristy. Ao amin'ny fanaovan-jiro lovia volamena.
Ny Asa nataon'ny Mpaminany.